Ndị Mmụta Baịbụl e nwere malite n’afọ 1870
Ụlọ Nche mbụ e bipụtara n’asụsụ Bekee n’afọ 1879
Otú Ụlọ Nche na-adị ugbu a
Baịbụl kwuru na mgbe Kraịst nwụchara, ụfọdụ n’ime ndị na-eso ụzọ ya ga-aghọ ndị ozizi ụgha. Ha ga-agwagbukwa eziokwu dị na Baịbụl. (Ọrụ Ndịozi 20:29, 30) Ka oge na-aga, ihe ahụ Baịbụl kwuru mere. Ha weere ihe Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya gwaa ya ozizi ndị na-ekpere arụsị. Ọ bụ otú ahụ ka Ndị Kraịst ụgha si malite. (2 Timoti 4:3, 4) Oleezi otú anyị si mara na ihe anyị na-akụzi taa bụ eziokwu dị na Baịbụl?
Jehova mere ka a mata eziokwu dị na Baịbụl mgbe oge ya ruru. Chineke kwuru na ‘n’oge ikpeazụ, ezi ihe ọmụma ga-aba ụba.’ (Daniel 12:4) N’afọ 1870, mmadụ ole na ole ndị chọrọ ịmata ihe Baịbụl na-akụzi chọpụtara na ọtụtụ ihe a na-akụzi na chọọchị dị iche iche adịghị na Baịbụl. N’ihi ya, ha malitere isi imi n’ala ka ha mara nke bụ́ eziokwu. Jehova nyekwaara ha aka ịghọta ihe Baịbụl na-akụzi.
Ndị chọrọ ịmata nke bụ́ eziokwu sara anya ná mmiri mụọ Baịbụl. Aha e ji mara ha bụ Ndị Mmụta Baịbụl, otú ha sikwa na-amụ Baịbụl n’oge ahụ bụ otú anyịnwa si na-amụ ya taa. Ọ na-abụ ha welite otu ihe a na-akụzi n’okpukpe, ha achọwa ịma ihe Baịbụl kwuru gbasara ya. Ọ bụrụ na ha agụọ otu amaokwu Baịbụl gụta ihe siiri ha ike nghọta, ha na-agụ amaokwu ndị ọzọ ka o nyere ha aka ịghọta nke ahụ. Mgbe ọ bụla ihe ha ghọtara dabara n’ihe ndị ọzọ e kwuru na Baịbụl, ha edee ya n’akwụkwọ. Otú a ha si na-amụ Baịbụl mere ka ha mata ihe bụ́ aha Chineke na eziokwu gbasara Alaeze ya. Ha chọpụtakwara ihe Chineke bu n’obi kee ma mmadụ ma ụwa anyị a. Ha mụtakwara ihe Baịbụl kwuru gbasara ndị nwụrụ anwụ, mụtakwa na Chineke ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọdịnihu. Otú a ha si saa anya ná mmiri na-amụ Baịbụl mere ka ha ghara ịkụzi ihe na-abụghị eziokwu. O mekwara ka ha ghara ime ihe Chineke kpọrọ asị.—Jọn 8:31, 32.
Tupu afọ 1879, Ndị Mmụta Baịbụl chọpụtara na oge eruola ka ha mee ka onye ukwu na onye nta mara ihe Baịbụl na-akụzi. N’ihi ya, n’afọ ahụ, ha bidoro ibipụta Ụlọ Nche nke Na-ekwusa Alaeze Jehova, bụ́ akwụkwọ anyị ka na-ebipụta ruo taa. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-ezi ndị mmadụ ozi ọma n’ihe karịrị narị mba abụọ na iri atọ. Anyị na-ebipụtakwa akwụkwọ anyị dị iche iche n’ihe karịrị narị asụsụ isii. O nwetụbeghị mgbe ezi ihe ọmụma bara ụba otú ọ bara ugbu a.
Mgbe Kraịst nwụchara, gịnị mere eziokwu dị na Baịbụl?
Gịnị nyeere anyị aka ịmaliteghachi ịkụzi eziokwu dị na Baịbụl?
mailto:?body=Olee Otú E Si Maliteghachi Ịkụzi Eziokwu Dị na Baịbụl?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012144%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Olee Otú E Si Maliteghachi Ịkụzi Eziokwu Dị na Baịbụl?